Galaxy Fold ကိုငါးမိနစ်အကြာတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌ရောင်းချခဲ့သည် Androidsis
Galaxy Fold ကိုငါးမိနစ်အတွင်းမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံသို့ရောင်းချခဲ့သည်
Galaxy Fold သည်မော်ဒယ်များအကြောင်းကိုအများဆုံးပြောခဲ့သည့်တစ်ခုဖြစ်သည် ဒီကျဆုံးခြင်း။ Samsung ၏ပထမဆုံးခေါက်နိုင်သောဖုန်းနှင့်ရက်သတ္တပတ်များစွာအကြာတွင်ဖြစ်သည် တရားဝင်စပိန်အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဤဖုန်းကိုဈေးကွက်တွင်လက်ခံခြင်းသည်အပြုသဘောဆောင်ပြီးအရောင်းအ ၀ ယ်ကောင်းသော်လည်းအချို့ကိစ္စများတွင်အမှတ်တံဆိပ်၏မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်နေသည်။
ဖုန်းကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်မိတ်ဆက် Samsung ကရှိနေခြင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း။ ဤတိုင်းပြည်တွင်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူ၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုမှာလျော့နည်းနေသော်လည်း Galaxy Fold သည်စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အမှန်မှာ၊ ၎င်း၏ပထမဆုံးနေ့၌ပင်ရောင်းလိုက်သည်။
ဒီဖုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာရောင်းအားနည်းနည်းလေးနဲ့ရောင်းချပေးခဲ့တယ်။ စားသုံးသူတွေကဒီ Galaxy Fold ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားကြလို့ပါ ငါးမိနစ်အတွင်းမှာယူနစ်အားလုံးကုန်သွားပြီ ဒီမော်ဒယ်၏။ ၎င်းကို Weibo ၏တရားဝင်ပရိုဖိုင်တွင် Samsung ကိုယ်တိုင်ကအတည်ပြုခဲ့သည်။
အချက်အလက်မရှိပါ ရောင်းချခဲ့ကြသောယူနစ်များ၏အရေအတွက်အပေါ်။ ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးမှာသာမန်အရာတွေဟာသူတို့တွေနည်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးကုမ္ပဏီအတွက်တော့ဒါကကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲ၊ တရုတ်လိုစျေးကွက်မှာတောင်သူတို့နဲ့သိပ်မသက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာဒီစက်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် Galaxy Fold ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းသည်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။ အဖြစ် Huawei Mate X ကိုစတင်မိတ်ဆက် ထို့အပြင်တရုတ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီစျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ယှဉ်ပြိုင်။ ဒါကြောင့်ဒီဖုန်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိနေခြင်းဟာသူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာရဲ့သော့ချက်ပဲ။
လာမည့်လများအတွင်း Galaxy Fold ရောင်းချမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတွင်ရှင်းလင်းသောအစီအစဉ်များရှိသည် သင့်ရဲ့ခေါက်နိုင်သောဖုန်းများ၏အကွာအဝေးကိုချဲ့ထွင် အဘယ်သူ၏အရောင်းဖုန်းများနှင့်အတူ ထို့အပြင်သိသိသာသာမြင့်တက်သင့်ပါတယ် လာမည့်နှစ်တွင်အနည်းဆုံးသည်သူ၏ခန့်မှန်းချက်အရသိရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Galaxy Fold ကိုငါးမိနစ်အတွင်းမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံသို့ရောင်းချခဲ့သည်
ဟိုင်း၊ ငါ Samung မှ။ ငါတို့ပထမလှိုင်း ၅၀ ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ရောင်းလိုက်ပြီ! ၁၀၀% အောင်မြင်မှု! အိုးသူတို့သာ 50 ပြန်သွားကြပါပြီ ... ယခုအချိန်အထိ
Smartwatch ရောင်းအားသည်တတိယသုံးလပတ်တွင် ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်သည်
Google Assistant နှင့်အဆက်မပြတ်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများဖြစ်နိုင်သည်